About Us | A.K Mobile Ko Myo San
A.K Mobile ဆိုင် အကျဉ်းချုပ်
A.K Mobile အရောင်းဆိုင်ကို၂၀၀၃ ခုနှစ်၊၆ လပိုင်း၊၁ ရက်နေ.မှစတင်ဖွင်.လှစ်ရောင်းချခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။Second Hand မော်ဒယ်မြင်.ဟန်းဆက်မျိုးစုံနှင်. Laptops,Tablet,PC များကိုဖြန်.ဖြူးရောင်းချပေးရုံမက မိမိအသုံးပြုလိုသည်. Handset,Laptops,Tablets များကိုအလိုက်ပေး၍အလဲအထပ်ပါပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။A.K Mobile ဆိုင်မှရောင်ချပေးသောHandset,Laptops,Tabletsများ
A.K Mobileအရောင်းဆိုင်မှ မော်ဒယ်မြင်. ဟန်းဆက်အမျိုးအစားများဖြစ်သည်. iphone,Samsung,Sony,HTC နှင်. Hwawei အမှတ်တံဆိပ်အစရှိတဲ.ဟန်းဆက်များကို အဓိကတင်သွင်းဖြန်.ဖြူးပါတယ်။Laptop ကိုတော.brand မျိုးစုံ တင်သွင်းရောင်းချပေးပါတယ်။A.K Mobile ဆိုင် ၏၀န်ဆောင်မှုများ
A.K Mobile အရောင်းဆိုင်မှ ၀ယ်ယူတဲ.ဟန်းဆက်တိုင်းရဲ. Software နဲ. Hardware အတွက် 1 month ပေးထားပြီး Game,Application,Myanmar font နှင်. Screen Guard များကိုပါ Customer များအတွက် free အနေနဲ.လည်းထည်.သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီထုတ် ဟန်းဆက်တွေအနေနဲ.ကတော့၎င်းကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ. Official warranty ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
A.K Mobile ဆိုင်မှ Customer များအတွက် သတင်းကောင်း
A.K Mobile အရောင်းဆိုင်မှ ပစ္စည်းမှန်၊ဈေးနှုန်းမှန်ဖြင်.သာ Customer များကိုရောင်းချပေးပါတယ်။ဒါ.အပြင် လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ရုံမကဘဲ မိမိမှာရှိတဲ.ဟန်းဆက်၊ Laptop နှင်. Tablet များကိုမော်ဒယ်မြင်.အမျိုးအစားနှင်. အလိုက်ပေး၍ အလဲအထပ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။Software ရေးတာ၊Version မြှင်.တာတို.ကိုပါ Customer များစိတ်တိုင်းကျပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Copyright © 2018 . A.K Mobile Ko Myo San . All Rights Reserved - Developed by SearchMyanmar Group